घरमा श्रीमान श्रीमतीबीचमा मनमुटाव हुन्छ ? सुत्ने कोठामा यी ५ फोटोहरु राख्नु पर्छ ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/घरमा श्रीमान श्रीमतीबीचमा मनमुटाव हुन्छ ? सुत्ने कोठामा यी ५ फोटोहरु राख्नु पर्छ !
घरमा श्रीमान श्रीमतीबीचमा मनमुटाव हुन्छ ? सुत्ने कोठामा यी ५ फोटोहरु राख्नु पर्छ !
घरमा के को फोटो राख्ने के को नराख्ने यसको बारेमा बास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । यदि तपाईको घरमा पनि श्रीमान श्रीमतीबीचमा मनमुटाव हुन्छ भने सुत्ने कोठामा यी ५ फोटोहरु राख्नु पर्छ ।
१. यदि श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा तनाव उत्पन भईराख्छ भने आफू सुत्ने कोठामा राधा कृष्णको फोटो राख्नुपर्छ २. यदि आफ्नो घरमा झगडा नपरोस् र श्रीमानज श्रीमतीकोबीचमा सुमधुर सम्बन्ध बनिराखोस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने हाँसको फोटो सुत्ने कोठामा राख्नुपर्छ ।
३. श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध गाढा बनाउँनको लागि शयनकक्षमा सुन्दर हिमालयको फोटो राख्नुपर्छ । यस किसिमको फोटोले माहोल प्रेममय बन्छ र सुमधुर सम्बन्ध भईराख्छ।४. शयन कक्षमा एउटा शंखको एउटा ठूलो चित्र टाँस्यो भने पति र पत्नीको सम्बन्ध सदा खुसी भईरहन्छ ।५. आफू सुत्ने कोठामा बाँसुरीको चित्र टाँस्यो भने जीवन नै संगीतमय बनाईदिन्छ । र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध र प्रेम गाढा बनिरहन्छ ।
घरमा के को फोटो राख्ने के को नराख्ने यसको बारेमा बास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । यदि तपाईको घरमा पनि श्रीमान श्रीमतीबीचमा मनमुटाव हुन्छ भने सुत्ने कोठामा यी ५ फोटोहरु राख्नु पर्छ ।१. यदि श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा तनाव उत्पन भईराख्छ भने आफू सुत्ने कोठामा राधा कृष्णको फोटो राख्नुपर्छ २. यदि आफ्नो घरमा झगडा नपरोस् र श्रीमानज श्रीमतीकोबीचमा सुमधुर सम्बन्ध बनिराखोस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने हाँसको फोटो सुत्ने कोठामा राख्नुपर्छ ।
सबैको जानकारीको शेयर गर्नुहोस !!
संसारकै सबैभन्दा ठुलो शिव लि’ङ्ग ! ॐ जप गरौ, मनोकामना पुरा हुनेछ !!
हनुमानको विशेष कृपा रहने ४ राशी कुन कुन ?